Dagaalka Muqdisho Oo Galay Maalintii Shanaad • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dagaalka Muqdisho Oo Galay Maalintii Shanaad
Dagaalka Muqdisho Oo Galay Maalintii Shanaad
August 27, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa magaaladda Muqdisho weli ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya Dawladda Federaalka iyo kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda,iyadoo maanta oo jimce ay tahay maalintiisa shanaad kadib markii Xarakadda Al-Shabaab ay maalinimadii isniinta ku dhawaaqday dagaal kama dambeys ah oo ka dhan Dawladda Federaalka iyo Ciidanka AMISOM.
Dagaalka ayaa xoogiisa uu ka socda inta u dhaxeysa Isgoysyada Bakaaraha iyo dabka ee magaaladda Muqdisho,waxaana sidoo kale jiraa duqeymo ay labada dhinac isku adeegsanayaan.
Duqeymaha ayaa saameyey degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag oo maalmihi lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalada.
Saraakiisha Caafimaadka ayaa ku waramaaya inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashey dagaalka,waxaana ay ku waramayaan in dad gaaraya 6-qof ay ku dhinteen halka kuwa intaas ka badan ay ku dhaawacmeen.
Suuqa Bakaaraha ayaa saaka gebi ahaan xiran,waxaana maalmihi lasoo dhaafay saamayn ku yeeshay dagaalada.
Xarakadda Al-Shabaab ayaa lagu soo waramaaya in magaaladda Muqdisho ay soo geliyeen ciidan aad u badan.
Dad indhahooda ku arkey ayaa sheegaya in maanta gelinki danbe ay Muqdisho soo galeen 12 gaari oo wada ciidamo ka yimid gobolada ay maamulaan al-Shbaab gaar ahaan Jubada hoose iyo Baay. Xarkada ayaa isu diyaarineysa dagaalkii u danbeeyey wax ay ugu yeereen “Dhamaadkii kuwa xadgudbey”.
Dhanka kale war ka soo baxay Wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in shacabku isdejiyaan, isla markaana dawladda oo kaalmeysanaysa ciidamada AMISOM ay ku filan tahay in iska caabiyaan weerarada al-Shabaab, xaaladdana gacanta kuq aban doonaan.